DA-BC13001 fitaovana fandrahoana vy 2020 varotra mafana kalitao avo lenta
Fitaovana mafana fivarotana mafana DA-BC37001 2020 vita tany Sina
Betsaka ny tombony azo avy amin'ny fandrahoana amin'ny fitaovana fandrahoana vy. Iray amin'ireo tombontsoa lehibe azo avy amin'ny fandrahoan-tsakafo miaraka amin'ny menaka kely vantany vao mahavita mamy tsara amin'ny lakozia ianao. Io dia mamela ny sakafo tsy matavy loatra ary ny menaka kely kokoa hahatratrarana crusty brown crust. Tombontsoa iray hafa koa ny fampiasana vy mahandro vy dia hanamafy ny sakafo ara-dalàna amin'ny vy. Ho fanampin'izany dia safidy hafa simika ho an'ny vilany tsy misy kitay vao haingana toa ny Teflon na Ceramic
DA-BC26001 / 32001/32002/37001/37002 vy vy 2020 amidy mafana natao tany Sina